Blackberry OS - iPhone Nhau | IPhone nhau
Blackberry OS ndiyo sisitimu inoshanda iyo yatinowana mumateminari echiratidzo chimwe chete. Kunyangwe hazvo iyo Blackberry yave nemakore mashoma mairi iyo yasaririra kumashure kwemakwikwi, kusvika kwe Blackberry 10 uye zviteshi zvitsva zvave kuita kuti kambani itange kuwana vateveri vatsva avo vakasarudza dzimwe sarudzo senge iPhone, Android kana kunyange Windows Runhare. Kunyangwe Blackberry 10 iine yakasimba yekumisikidza base, iyo system zvakare inokwanisa run apps kubva kuGoogle Play Store, chitoro cheapp.
kubudikidza Pablo Aparicio inoita 6 makore .
Mushure mekusiya iyo yekuraira post makore matatu apfuura, aimbova-CEO weKutsvagisa muMotion (RIM, Blackberry ye…
Apple ichapa mari kuvashandisi veApple kana vakatenga iPhone
kubudikidza Nacho inoita 6 makore .
Android ine yakawanda uye yakawanda chikamu chemusika uye zvisingaite, mamwe masisitimu anoshanda ane zvishoma uye zvishoma. This…